ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၅၀ကို ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ ransomware တိုက်ခိုက်မှု
15 May 2017 . 1:06 PM
Europol ဥရောပရဲအေဂျင်စီ ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ နိုင်ငံတကာ “ransomware” ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုဟာ နိုင်ငံ ၁၅၀မှာ ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း တစ်သိန်းကျော်ကို ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုဟာ နိုင်ငံများစွာကို ထိခိုက်သွားတဲ့အတွက် “သတိပေးချက်တစ်ခု” ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့လည်း Microsoft ကဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Jan Op Gen Oorth က ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ အရေအတွက် မြင့်မားလာနိုင်တယ်လို့ တနင်္ဂနွေနေ့က ဆိုပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ တနင်္လာနေ့မှာ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး သောကြာနေ့မှာ စတင်ခဲ့တာကြောင့် အလုပ်ဖွင့်လို့ ပြန်လာတဲ့လူတွေဟာ အထူးသဖြင့် ခံရဖွယ်ရှိကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့တာပါ။
တရုတ်သတင်းဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ တစ်ကမ္ဘာလုံးတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ ransomware ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံက တက္ကသိုလ်ကွန်ယက်အတော်များများကိုလည်း တိုက်ခိုက်လိုက်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ Beijing News က နိုင်ငံတဝှမ်းရှိ တက္ကသိုလ်အတော်များများက ကျောင်းသားတွေဟာ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အပြင် Pop-up window ထဲဝင်ဖို့၊ ဖိုင်တွေ ထုတ်ပြစေဖို့အတွက် ဒေါ်လာ ၃၀၀ လောက်တောင်းခဲ့ကြောင်းလဲ သိရပါတယ်။
သောကြာနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုဟာ အကြီးမားဆုံး အွန်လိုင်းအကြမ်းဖက်ခံရမှုအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့ပြီး စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ ဘဏ်များ၊ အစိုးရအေဂျင်စီများနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်တွေက ကွန်ပျူတာတွေအတော်များများ ထိခိုက်သွားခဲ့တာပါ။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ ဗြိတိသျှကျန်းမာရေးစနစ်ကြီးကိုလည်း ထိချက်နာစေခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့တွေရဲ့ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းမှာ ထိခိုက်ခဲ့တာကြောင့် လူထောင်ပေါင်းများစွာရဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုတွေကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။
ဒီအကြီးမားဆုံး တိုက်ခိုက်မှုကို Microsoft က အကြီးမားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ် ရည်ညွှန်းခဲ့ပြီး Windows တွေမှာလည်း ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Ref: Time, BBC, The Guardian
Europol ဥရောပရဲအဂေငျြစီ ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ နိုငျငံတကာ “ransomware” ဆိုကျဘာ တိုကျခိုကျမှုဟာ နိုငျငံ ၁၅၀မှာ ရှိတဲ့ အဖှဲ့အစညျးပေါငျး တဈသိနျးကြျောကို ထိခိုကျခဲ့တယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ သောကွာနကေ့ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ဆိုကျဘာတိုကျခိုကျမှုဟာ နိုငျငံမြားစှာကို ထိခိုကျသှားတဲ့အတှကျ “သတိပေးခကျြတဈခု” ဖွဈလာခဲ့တယျလို့လညျး Microsoft ကဆိုခဲ့ပါတယျ။
ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ Jan Op Gen Oorth က ဆိုကျဘာတိုကျခိုကျမှုခံရတဲ့ အရအေတှကျ မွငျ့မားလာနိုငျတယျလို့ တနင်ျဂနှနေကေ့ ဆိုပါတယျ။ ဒီတိုကျခိုကျမှုဟာ တနင်ျလာနမှေ့ာ ပွနျလညျ ဖွဈပှားနိုငျပွီး သောကွာနမှေ့ာ စတငျခဲ့တာကွောငျ့ အလုပျဖှငျ့လို့ ပွနျလာတဲ့လူတှဟော အထူးသဖွငျ့ ခံရဖှယျရှိကွောငျး သုံးသပျခဲ့တာပါ။
တရုတျသတငျးဌာနရဲ့ ထုတျပွနျခကျြအရ တဈကမ်ဘာလုံးတိုကျခိုကျခံနရေတဲ့ ransomware ဗိုငျးရပျဈဟာ တရုတျနိုငျငံက တက်ကသိုလျကှနျယကျအတျောမြားမြားကိုလညျး တိုကျခိုကျလိုကျကွောငျးဆိုပါတယျ။ Beijing News က နိုငျငံတဝှမျးရှိ တက်ကသိုလျအတျောမြားမြားက ကြောငျးသားတှဟော ဗိုငျးရပျဈတိုကျခိုကျမှုကိုခံလိုကျရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒီလိုတိုကျခိုကျခံလိုကျရတဲ့အပွငျ Pop-up window ထဲဝငျဖို့၊ ဖိုငျတှေ ထုတျပွစဖေို့အတှကျ ဒျေါလာ ၃၀၀ လောကျတောငျးခဲ့ကွောငျးလဲ သိရပါတယျ။
သောကွာနကေ့ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ တိုကျခိုကျမှုဟာ အကွီးမားဆုံး အှနျလိုငျးအကွမျးဖကျခံရမှုအဖွဈ စံခြိနျတငျခဲ့ပွီး စကျရုံအလုပျရုံမြား၊ ဘဏျမြား၊ အစိုးရအဂေငျြစီမြားနဲ့ သယျယူပို့ဆောငျရေး စနဈတှကေ ကှနျပြူတာတှအေတျောမြားမြား ထိခိုကျသှားခဲ့တာပါ။ ဒီတိုကျခိုကျမှုဟာ ဗွိတိသြှကနျြးမာရေးစနဈကွီးကိုလညျး ထိခကျြနာစခေဲ့ပွီး ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု အဖှဲ့တှရေဲ့ ၂၀ရာခိုငျနှုနျးမှာ ထိခိုကျခဲ့တာကွောငျ့ လူထောငျပေါငျးမြားစှာရဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုတှကေို ဖကျြသိမျးလိုကျရပါတယျ။
ဒီအကွီးမားဆုံး တိုကျခိုကျမှုကို Microsoft က အကွီးမားဆုံးတိုကျခိုကျမှုအဖွဈ ရညျညှနျးခဲ့ပွီး Windows တှမှောလညျး ဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
by 2B .4days ago
by Zawyè .6days ago